प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकालाई भने, ‘म झुट बोल्न जान्दिनँ’- फिचर - कान्तिपुर समाचार
प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकालाई भने, ‘म झुट बोल्न जान्दिनँ’
पुस १६, २०७६ बुनु थारु
काठमाडौँ — कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा बुधबार नेपाल स्काउटले गरेको बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमका लागि स्टेज चिटिक्क परेर सजाइएको थियो । स्काउटसँग आवद्ध विभिन्न विद्यालयका सयौँ विद्यार्थी सहभागी थिए। हल खचाखच भरिएको थियो ।
विद्यार्थी स्काउटको हरियो पोशाक अनि घाँटीमा स्कार्फ र ब्याच भिरेका थिए। करिब आधा घण्टापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र श्रीमती राधिका शाक्यको साथमा मन्द मुस्कानसहित हात हल्लाउँदै हलभित्र प्रवेश गरे ।
बालबालिका भनेपछि हुरुक्कै हुने खालका छन् ओली । उनी मिर्गौलाको नियमित डायलाइसिस गराइरहेका छन् । धेरैपछि उनी सरकारी निवास बालुवाटार बाहिरको कार्यक्रममा देखा परेका हुन् । प्रधानमन्त्रीसँग भलाकुसारी गर्न उपस्थित विद्यार्थी उत्सुक देखिन्थे । प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम सुरु हुँदा विद्यार्थीका कान ठाडा भए ।
बालबालिकाहरूले प्रधानमन्त्रीको बाल्यकाल, प्रेरणाको स्रोत सपनाका कुरा, राजनीति उपयुक्त छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए ।
'बाल्यकालमा तपाईंको लक्ष्य के थियो ? तपाईले कहिल्यै यो देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने कल्पना गर्नुभएको थियो ?' विनम्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न राखे ।
ओली एकछिन मुस्कुराए अनि छेउमा रहेको माइक्रोफोन आफूतिर सार्दै भने, ‘दुर्गम गाउँको साधारण किसान परिवारको बालकले भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने कल्पना कहिल्यै गरेको थिइनँ । शिक्षक देखेँ, शिक्षक बन्न मन लाग्ने, विद्धान देखे विद्धान् ! निश्चित लक्ष्य थिएन । पछि बुझ्दै जाँदा समाजमा बेठिक कुराहरू देखेँ, ठीकमा ल्याउन संघर्ष तथा आवाज उठाउनुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो । जेलमा हुँदा कति बेला मरिन्छ भन्ने हुन्थ्यो कहाँबाट प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने कल्पना गर्नू ?’
अर्का एक बालकले प्रधानमन्त्री बन्न के गर्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा राखे । ओलीले सरल भाषामा जवाफ दिए, ‘परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले विभिन्न अवसर र विकल्प छन् । युवाले महान उद्देश्य लिनुपर्छ। चन्द्रमा छुने उद्देश्य लिनुपर्छ । कुनै पनि सपनाको लागि इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ । युवा उमेरमा नै राम्रो कार्य गरेर देखाउनुपर्छ । गम्भीर भएर काम गरिएन भने परिणाम राम्रो हुँदैन ।’
बेलाबेलामा ओली बालबालिकाले गरेका प्रश्न बुझ्दैनथे। बालबालिकालाई फेरि प्रश्न दोहोर्‍याउन आग्रह गर्थे । छेउमा बसेकी पत्नी राधिकाले पानी पिउन मृगौला पीडित ओलीलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेकी हुन्थिन् ।
बालबालिका ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए । हरेक प्रश्नको उत्तरमा उनीहरु ताली बजाइरहेका थिए ।
बालबालिकाको भविष्यका लागि अभिभावकले प्रतीभा पहिचान गर्नुपर्छ
‘नेपाली समाजमा सानै उमेरमा बालबालिकालाई भविष्यको निर्णय लिन किन लगाइन्छ प्रमज्यू ?’ निलाशा दाहालको प्रश्नमा ओलीले पछौटेपन तथा गरिबी अझै पनि व्याप्त रहेको बताउँदै प्रतिभाको उचित पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘खेल्ने, पढ्ने उमेरमा विवाह गराइदिने चलन छ । कुन विषयमा दक्ष छन् प्रतीभा पहिचान गरेर पढाइ, विधा र अवसर दिनुपर्छ । बालबालिका सबैमा असाधारण प्रतीभा हुन्छ । अभिभावकहरुले पनि बुझ्नुपर्छ ।’
म कहिल्यै झुट बोल्न सक्दिनँ
बाल्यकालमा कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्नमा ओलीले आफू सोझो, इमान्दार र झुट बोल्न नजान्ने मान्छेको रुपमा बालबालिकाहरुलाई आफ्नो स्वाभावको बारेमा बताए ।
उनले बालबालिकासँग आफ्नो बाल्यकालको कुरा साँट्दै भने, ‘मलाई पढ्नभन्दा खेल्न बढी मन लाग्थ्यो । म कहिल्यै झुट बोल्न सक्दिनँ । गोप्य कुरा पनि राख्न सक्दिनँ मनमा । म सोझो मान्छे । मेरो मनमा आएको कुरा भन्दिन्थे ।’ आफू घरको काम गर्ने, झगडा मन नपराउने अनि आज्ञाकारी विद्यार्थी रहेको उनले सुनाए ।
प्रेरणाको स्रोत हजुरआमा
ओलीले ३ वर्षको उमेरमा आमा गुमाएका थिए । त्यसपछि प्रेरणाको स्रोत हजुरआमा रहेको उनले बताए । हजुरआमासँगको सम्झना विद्यार्थीहरूलाई यसरी सुनाए, 'मेरो प्रेरणाको स्रोत मेरो हजुरआमा हो । उहाँले नै मलाई राम्रो बोल्ने, मेहनती हुनुपर्छ, भेदभाव गर्न नहुने, सत्मार्गमा लाग्ने, शक्तिसँग नझुक्न सिकाउनुभएको हो ।'
'फुर्सदको समयमा के गर्नुहुन्छ ?' भन्ने प्रश्नमा ओलीले आफूलाई फुर्सद नै नमिल्ने गरेको सुनाए । उनले भने, ‘राति मात्र हो सुत्नेबेला मेरो फुर्सद हुने। त्यतिबेला म अबेलासम्म किताब पढ्छु । पत्रपत्रिका पढ्छुँ । नयाँ कुरा सिक्न खोज्छु ।’
उनले निदाएर देखेको सपनामा विश्वास नगर्ने बताउँदै विपनामा देखेको सपनामा विश्वास गर्ने बालबालिकाहरूलाई बताए ।
राजनीति होइन पढाइमा ध्यान देऊ
एक विद्यार्थीले राजनीतिमा लाग्नु उपयुक्त छ या छैन भनेर गरेको प्रश्नमा पहिला पढाइमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘राजनीतिको बारेमा चासो राख्नुपर्छ । उनले ठट्यौली पारामा भने, ‘अहिले तपाईहरूको उमेरले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्न । पढाइमा केन्द्रित हुनुस् ।’ राजनीति गर्छु भन्ने इच्छा छ भने इमानदार भएर भ्रष्ट नहुन उनले सुझाव दिए ।
कार्यक्रमको अन्तिममा अंग्रेजीमा छोटो मन्तव्य दिँदै ओलीले बालबालिकाहरुलाई शुभकामना व्यक्त गरे । उनले भने, ‘तपाईहरू नै हो पछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्ने, इमान्दार हुनुस् ।’
बालबालिका चर्को हुटिङ र सिटी बजाइरहेका थिए । ओलीले विदाइका हात हल्लाउँदै म एकदमै खुसी छु र तपाईंहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ होला भनेर मन्तव्यलाई बिट मारे र बालबालिकाहरूसँग हात हल्लाउँदै सामूहिक फोटो खिचाए । प्रकाशित : पुस १६, २०७६ १८:४३
गणतन्त्र आए पनि नेतृत्वको सामन्ती सोच हट्न सकेन : अष्टलक्ष्मी (भिडियो)
‘स्थायी समितिमा अरु नेताहरुले साथ दिनुभएन’
काठमाडौँ — नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश ३ इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य नेकपाभित्र महिला सहभागिताको कुरा जोडदार ढंगले उठाउने नेतृ हुन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा भएपछि गठन गरिएको ९ सदस्यीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला छैनन् । ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा २ जना महिला छन् । मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चलेको स्थायी समिति बैठकमा शाक्य र पम्फा भुसालले पार्टीमा महिला सहभागिताको विषयलाई लिएर नेतृत्वमाझ गम्भीर प्रश्न उठाए । सचिवालयलाई १५ सदस्यीय बनाउन, सबै समितिहरुमा महिला सङ्ख्या बढाउने लगायतका लिखित माग राखेर नेतृत्वलाई दबाब दिए।
पुस २३ गते नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा महिला सहभागिताको विषय उठ्छ कि उठ्दैन ? नेकपामा महिला सहभागिता र नेतृत्वको सोचमा के समस्या छ ? महिलाहरुले उठाएका मुद्दामा नेतृत्व कति गम्भीर छ ? यस्तै विषयमा केन्द्रीत रहेर नेतृ शाक्यसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी :
पार्टी एकताको सुरुमा जोडदार ढंगले नउठेको महिला सहभागिताको कुरा अहिले गम्भीर ढंगले उठाउनु भयो । यी मुद्दा उठाउन किन यति लामो समय लाग्यो ?
हामीले पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा मात्रै होइन महिला सहभागिताको कुरा निरन्तर उठाउँदै आएका छौं । सशक्त ढंगले कुराहरु पनि राख्ने गरेका छौं । सचिवालयमा महिला चाहियो भन्ने कुरा अहिलेको मात्रै होईन, पहिला देखि नै विरोध र माग गर्दै आएका हौं ।
अहिले एक बर्षपछि स्थायी समितिको बैठक बस्यो । जबकी तीन महिनामा बैठक बस्नु पर्दथ्यो । त्यो बैठकमा विधान संशोधनको प्रस्ताव आयो । संशोधनमा केन्द्रमा मात्रै उपाध्यक्ष राख्ने भन्ने आयो । हामीले केन्द्रमा राख्ने हो भने तल्ला कमिटीमा पनि राखौं, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था गरौं भन्यौं।
पार्टीमा एक तिहाई महिला हुनुपर्छ भनेर संविधानले बोलेको छ । तत्कालीन नेकपा एमाले हुँदै सम्पूर्ण पार्टीले सहमति गरेको यो स्थितिमा शीर्ष नेता बस्ने सचिवालयमा महिला शून्य छ। अब यसरी हुँदैन भनेर कमरेड पम्फा भुसाल र मैले लिखित प्रस्तवा राख्यौं । व्यापक रुपमा कुरा उठायौं । अन्तिममा अहिले सकिदैँन भन्ने जवाफ नेतृत्वबाट आयो ।
यो महिलाको इस्यु हो यसकारण महिलामात्रै बोल्नु पर्छ भन्ने होइन । यो त राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रीयकरण भइसक्यो । स्थानको कुरा मात्रै होइन, कैयौं मुद्दाहरु छन्। यहाँसम्म आईपुग्दा पार्टीले सहजरुपमा लिनुपर्ने हो । तर नेतृत्वले लिन सक्नु भएको छैन । उहाँहरुले जुन स्थान पाइरहनु भएको छ, हामीलाई जिम्मेवारी दिँदा उहाँहरुको स्थान कटौती हुने पनि होइन । स्थान थपिदिने हो । ९ जनाको ठाँउमा ११ जना बनाउने हो । यो कुरालाई नेतृत्वले सहजरुपमा लिन सक्नु भएन ।
तपाईंलाई के लाग्छ, समस्या नेतृत्वको सोचमा हो कि सांगठनिक अवस्थामा ? कुन कुरा मुख्य हो ?
नेतृत्वको सोचको समस्या हो । अहिले पनि पितृसत्ता हावी छ । हामी गणतन्त्रमा आयौं । सामन्ती, निरङ्कुश व्यवस्थासँग लड्यौँ । एकतन्त्रीय व्यवस्थासँग लड्यौं । त्यसमा महिलाहरुको पनि सशक्त भूमिका थियो । महिलाहरु जे–जे भए पनि बलिदानीपूर्ण भावनाका साथ पूरै त्याग गरेर सक्रियतापूर्वक लागेको इतिहास हामीसँग छ । तब न गणतन्त्र आयो । तर न महिलाहरुको कदर भयो, न योगदानको मूल्याङ्कन भयो, न महिलाहरुलाई स्थान दिइएको छ । यो सामान्तवादी सोच नभए के हो त ?
फेरि हामीले पुरुषहरुको स्थान मागेको पनि होइन । राजनीतिक निर्णयले सङ्ख्या थप्न सकिन्छ । केन्द्रमा एउटा उपाध्यक्षका लागि उहाँहरुले सहमति गरेर विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सक्नुहुन्छ भने महिलाको बिषयमा राजनीतिक सहमति गरेर थप्न सक्नुहुन्न ? प्रष्ट भन्दा गणतन्त्र आए पनि, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेतृत्वमा सामन्ती सोच घट्न सकेन । महिलामैत्री सोच आएन । महिलालाई विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने भावना देखिएन ।
संगठनका तल्लो तहमा महिला सहभागिता राम्रै हुन्छ । माथिल्लो तहमा जाँदा थोरै हुँदै जान्छ । गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वका निर्णयहरुमा महिला नेतृत्वको सहभागिता देखिदैँन किन ?
पार्टीमा राजनीतिक निर्णय गर्ने, वैचारिक छलफल गर्ने ठाँउ स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति नै हो । स्थायी समितिमा हामी दुईजना मात्रै छौं । केन्द्रीय समितिमा धेरै हुनुहुन्छ, ३३ प्रतिशत नपुगे पनि । सचिवालयको काम स्थायी र केन्द्रीय समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, छलफल गर्ने, प्रस्ताव तयार गर्ने र फेरि स्थायी र केन्द्रीय समितिको बैठकमा ल्याउने हो ।
सचिवालयमा उहाँहरु बसिरहँदा महिला शून्य बनाउन मिल्छ ? मिल्दैन नि ! तर उहाँहरुले त्यसरी लिईराख्नु भएको छैन ।
महिलाहरुकै नेतृत्व विकासमा केही कमी भएर यस्तो समस्या भोग्नु परेको त होइन होला नि ?
त्यस्तो भन्नै मिल्दैन । महिलाहरुको क्षमता छैन भनिरहँदा पुरुषहरुको पनि क्षमता अघि राखौं न त । छलफल गरौं, कसको कति क्षमता छ भनेर । महिलाहरु क्षमताबिहीन, नेतृत्व क्षमता नभएका, निर्णय गर्न नसक्ने, असक्षम कुनै पनि मानेमा छैनन् । हामीले महिलाको भूमिका पनि देखेका छौं । छलफलमा भाग लिने तौरतरिका पनि देखेका छौं । योगदानमा तलमाथि छैन ।
निरन्तर खटिरहनुभएको छ। अझ पुरुषहरुलाई राजनीति गर्न धेरै सजिलो छ । खुला समाज छ । गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । यस्तो बेलामा घर, परिवार, बालबच्चा, सामाजिक व्यवहारदेखि सबै सम्हालेर पनि राजनीतिमा लागिरहनु भएको छ । यो तहको नेताहरुले राम्रोसँग नेतृत्व गर्नुभएको छ । अहिले हामी दुईजना मात्रै होईन, हिजो भूमिगतकालमा लामो जीवन बिताएर नेतृत्व लिएका थुप्रै महिला हुनुहुन्छ। अहिले सबै पछाडि परिरहेको अवस्था छ । युद्धकालमा सक्षमतापूर्वक आँट र हिम्मतका साथ लडिरहनुभएको महिला पंक्ति छ । खै त उहाँहरुलाई अवसर ? यो खालको स्थितमा ठूला निर्णय गर्ने ठाँउमा महिला कमजोर नै देखियो । पुरुषकै नेतृत्व हावी भयो । यसले गर्दा पनि हामीलाई गाह्रो भएको छ । हाम्रो कामको मूल्याङ्कन छैन, योगदानको कदर छैन । इमान्दार मान्छेहरुको कुनै लेखाजोखा छैन । निष्ठापूर्वक लाग्नेहरुको स्थान छैन । यो स्थिति कम्युनिष्ट पार्टीमा बन्नै हुँदैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीमा अन्याय हुँदैन, अवसर पाँउछ । आफ्नो क्षमता देखाउँछ । र त्यसरी नेतृत्व गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने भावना हुन्छ ।
मतलब अझै दबाब पुगेन भन्ने हो ?
दबाब प्रशस्त नपुगेको हो । बरु हिजोको अवस्थामा सशक्त थियो । ०६२ साल साँच्ची नै खुशीको बर्षजस्तो लाग्छ । त्यो बेला तत्कालीन नेकपा एमालेमा केन्द्रीय महिला विभाग थियो । विभागको प्रमुख साहना प्रधान हुनुहुन्थ्यो, म सचिव थिएँ । हामीले टीममा छलफल गरेर नागरिकताको सवालमा, एकतिहाई महिलाको सवालमा, पैतृक सम्पत्तिको सवालमा, प्रजनन हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा विशेष व्यवस्थालगायतका आठ एजेन्डा पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित गरेको हो ।
त्योबेला पनि केन्द्रीय समितिमा महिलाहरु प्रयाप्त थिएनन् । ५/६ जना मात्रै थियौं । तर हाम्रा मुद्दा सहजरुपमा पार्टीले स्वीकार गर्‍यो। त्यही एजेन्डा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको पनि बन्यो । सञ्जालको अध्यक्ष साहना प्रधान नै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यहाँ राख्नु भयो । सबै महिलाले छलफल गर्‍यौं । त्यसपछि त्यो संसदको विषय बन्यो । सबै पार्टीले स्वीकार गरे। अहिले ती कुराहरुलाई परिमार्जित गरेर झन् अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर अवस्था त्यस्तो छैन । अहिले निष्कृयता देखिएजस्तो, आत्मसात गर्न नचाहेजस्तो देखिएको छ । यो राम्रो होईन । यो अवस्थाले प्रगातिको दिशामा जान सकिदैंन । महिला पुरुष समान छन् भन्ने धारणा राखेर विकास, समृद्धिको बाटोमा लाग्न सकिएन भने देशको प्रगतिमा धेरै बाधा पुग्छ ।
अब दबाबका शैलीहरु बदल्नु पर्ने हो कि ?
अहिले महिलाहरु वैचारिक छलफलमा खुट्टा नकमाई खडा हुनुपर्छ । पार्टीमा एउटा सिद्धान्त, विधि हुन्छ । त्यसभित्र बसेर लडाँइ लड्नु पर्छ । सडकमा गएर पार्टीको विरोध गर्ने कुरा पनि हुँदैन । पार्टीभित्रै बसेर वैचारिक संघर्ष गर्ने, विधिको कुरा गर्ने, स्थानको लागि संघर्ष गर्ने हो ।
आम रुपमा त नभनौं, पछिल्लो समय यसमा चाहिँ महिलाहरु कमजोर भएकोजस्तो लागेको छ । अहिले महिला संगठन पनि कमजोर भएको छ । महिलाहरु आवाज उठाउने सवालमा एकजुट भएर हिड्न सकेको स्थिति देखिदैंन ।
किन यस्तो अवस्था ?
पार्टीभित्र गुट उपगुट छन् । महिलाहरुको नेतृत्व धेरैजसो पुरुष कमरेडहरुले गर्नुभएको छ । त्यसले धेरै महिलाहरु विभाजित छन् । त्यो विभाजनले गर्दा महिलाहरु एकजुट हुन सकेका छैनन् । मेरो गुट, तेरो गुट । मैले बोल्न अप्ठयारो हुन्छ भन्ने अवस्था छ । त्यसले महिलाहरु एकजुट नहुँदा संघर्ष कमजोर हुन्छ । आवाज कमजोर हुन्छ । सामूहिक रुपबाट हामी सबैको ‘इस्यु’ हो भनेर लाग्यो भने स्थान बलियो बनाउन सकिन्छ । तर, पार्टीमा वैचारिक संघर्षको सवालमा एकजुट भएर लड्ने अवस्था कमजोर बनेको छ ।
स्थायी समिति बैठकमा महिला सहभागिताको प्रश्न उठाउँदा अन्य नेताहरुको भूमिका कस्तो पाउनु भयो ?
पितृसत्ता र सामन्तवादी सोच पुरुषहरुमा मात्रै होइन महिलाहरुमा पनि छ । महिलालाई महिलाले सहयोग नगर्ने । महिलाले महिलालाई खुट्टा तान्ने । महिलाले महिलालाई अवसर नदिने, वञ्चित गर्ने । अनेकौं चलखेल गर्ने । अनि विचार पनि कमजोर देख्छु । यो समस्या महिला नेतृत्वभित्र पनि छ ।
स्थायी समितिको बैठकमा हामी दुई जनाले गम्भीर ढंगले कुरा राख्यौं । पुरुष साथीहरुले साथ दिनुभएन । यसको मतलब उहाँहरु विरोधमै उत्रिनु भएन, तपाईहरुको कुरा हामी मान्दैनौं पनि भन्नु भएन। मौन समर्थनजस्तो मात्र पाइयो।
पार्टीभित्र सबै महिलाको साथ छ त तपाईहरुले उठाएका मुद्दामा ?
स्थायी समितिको बैठकमा हामी दुईजनाले कुरा उठाउँदा तलबाट पनि साथ पाएका छौं । केही साथीहरुले फोन गरेर हाम्रो पनि साथ छ, तपाईहरु अझै लड्दिनुस् भन्नुभएको छ । मूल नेतृत्वमा तपाईंहरु हुनुहुन्छ, हामी आशावादी छौं तपाईहरुबाट, आज तपाईहरु लड्दिनु भयो भने भोलि हामीले पनि स्थान पाउँछौ होला भन्ने कुरा र आशा उहाँहरुको छ ।
पार्टीकै लागि भनेर निरन्तर लागिरहँदा आशा, अपेक्षा त हुन्छ । मैले पनि केही स्थान पाउँछु होला । म पनि नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्छु भन्ने आशा हुन्छ । त्यसकारण तल्ला कमिटीका महिला साथीहरु धेरैले फोन गरेर भन्नुभएको छ, तपाईहरुको साथमा हामी पनि छौं है ।
पुस २३ गतेबाट केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ, त्यहाँ यी मुद्दा कसरी उठाउने तयारी गर्नुभएको छ ?
महिला साथीहरुले भनिरहनुभएको छ, तपाईंहरु स्थायी समितिमा लड्नु भयो, त्यहाँ हुन सकेन । अब हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा जोडतोडले कुरा राख्छौं । तपाईहरुले हामीलाई निर्देश गर्नुहोला, कसरी अगाडि बढ्दा ठीक हुन्छ भन्नुभएको छ । सायद केन्द्रीय समितिको बैठकमा गम्भीर ढंगले कुरा उठ्छ । त्यसलाई टुंगोमा कसरी पुर्‍याउन सक्छौं त्यो भने हेर्नै बाँकी छ ।
कति आशावादी हुनुहुन्छ, नेतृत्वले सुन्छ भन्नेमा ?
स्थायी समिति बैठकमा हामीले कुरा राखेपछि अहिले यो सम्भव छैन भन्ने जवाफ आयो । त्यसपछि मैले नेतृत्वलाई भने- अब यो कुरा बाहिर बोल्छु । तपाईले रोक्न सक्नुहुन्न । कतिसम्म थेग्न सक्नुहुन्छ हेर्छौं हामी पनि । यो हामी दुईजनाको मुद्दा होइन, सिंगो महिलाहरुको मुद्दा हो । सिंगो समाजको मुद्दा हो । त्यसकारण म बाहिर बोल्छु भनेको छु । त्यसपछिमात्रै उहाँहरुलाई राख्नु त पर्ने हो भन्ने महशुस भयो कि जस्तो लागेको छ ।
अब पनि उहाँहरुले नटेरेर, नमानेर कति दिन ? कति बर्ष ? महिलामैत्री समाज, महिलामैत्री सोच विकास भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बेलामा महिलालाई माइनस गरेर जान खोज्दै हुनुहुन्छ। तर त्यस्तो नेतृत्व सफल हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी भूमिका पाएका अध्यक्षले यो विषयमा केही गर्छन् भन्ने विश्वास कति छ ?
विश्वास त गर्नै पर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होईन, समाज पनि विश्वासबाटै चल्छ । तर त्यसो भनिरहँदा कुनै न कुनै बेला यो नेतृत्वले स्वीकार गर्न पर्छ नै । परिवर्तनसँगै उहाँहरुले भूमिका खेल्न सक्नुभएन भने त्यो नेतृत्व सफल हुनसक्दैन । केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट अझै दबाब पर्छ । महिलाहरु पनि अझै सशक्त बनेर जान सक्नुपर्छ ।
प्रकाशित : पुस १६, २०७६ १८:२८